Guardiola wuxuu doonayaa Ramos, shan tababare
Laakiin sidaan halkan ku baranay, waxaan idinla wadaagaynaa xantii iyo xantii ugu dambeysay ee suuqa ka jirtay wargeysyada ugu waa weyn Yurub Talaadadii.
Manchester City ayaa isha ku heysa xaalada kabtanka Real Madrid Sergio Ramos si ay si xor ah kula soo saxiixato xagaagan. (ESPN)
Xiddiga khadka dhexe ee kooxda Man City ee Kevin De Bruyne ayaa diiday dalabkii ugu horeeyay ee uga yimid kooxda isaga oo ka walwalsan xawaaraha kordhinta shanta sano ah. (Times – rukhsad loo baahan yahay)
Tottenham ma rabto inay iska iibiso Delle Alli suuqa kala iibsiga bisha Janaayo, laakiin goolhayayaasha Paulo Gazzaniga iyo Danny Rose ayaa furan. (Sky Sports)
Chelsea ayaa rajeyneysa inay fursad siiso Frank Lampard laakiin xaaladiisa ayaa ah mid si joogto ah isha loogu hayo, iyadoo Thomas Tuchel, Max Allegri, Brendan Rodgers iyo Ralph Hasenhuttl ay kamid yihiin goolasha hadii ay haraantiiyaan. (Madaxbanaan)
Weeraryahankii hore ee Chelsea haatana ah tababaraha haatan ee Ukraine Andriy Shevchenko ayaa sidoo kale loo arkaa bedelka ugu macquulsan ee Lampard. (Le10 Sport)
Ajax iyo Wolves ayaa ku biiray liis dheer oo kooxo xiiseynaya inay helaan Inter Milan oo 28 jir ah Christian Eriksen. (Sky Italia iyada oo loo marayo Mail)
Arsenal ayaan qorsheyneynin inay Mohamed El-Neny ka iibiso Besiktas bisha Janaayo. (Kubadda Cagta London)
Arsenal ayaa dhawaan u soo bandhigtay Juventus saxiixa Mesut Ozil laakiin kooxda reer Talyaani ayaa mustaqbalka u aragta Dejan Kulusevski. (Isboortiga CBS)
Arsenal ayaa isha ku heysa xaalada 24 jirka weerarka uga ciyaara kooxda Norwich City Emi Buendia laakiin wali ma aysan soo bandhigin wax dalab ah. (Kubadda Cagta London)
Arsenal ayaa aragtay heshiis isku badalasho Buendia oo ay kala soo wareegtay Norwich iyadoo 21 jirka reer England Joe Willock iyo Reiss Nelson la heli karo. (Madaxbanaan)
Laakiin Norwich ayaa la filayaa inay iska diido dalabyada qaaliga ah ee uga imanaya Buendia, Max Aarons iyo Todd Cantwell iyagoo isha ku haya inay ku laabtaan Premier League. (Sky Sports)
Agaasimaha isboortiga Borussia Dortmund Michael Zorc ayaan meesha ka saarin in 24 jir qadka dhexe Julian Brandt uu ku biirayo Arsenal bisha Janaayo. (Mirror)
Manchester United iyo daafaca Marcos Rojo ayaa ka wada hadlay suurtagalnimada 30 jirkaan uu ugu laabanayo Argentina si uu ugu biiro Boca Juniors, laakiin wadahadalada ma dhamaan. (Boostada)
Qaab ciyaareedka Eric Bailly ayaa ka dhaadhicin kara United inaysan u dhaqaaqin khadka dhexe bisha Janaayo. (Manchester Evening News)
Saddexda gool ee ugu fiican Barcelona waa laacibka Liverpool ee Georginio Wijnaldum. Ilmaha Man City Eric Garcia iyo weeraryahanka Lyon Memphis Depay uma badna inay diyaar noqon doonaan bisha Janaayo laakiin waxay u badan tahay inay heli doonaan xagaaga marka ay seddexduba xor yihiin. (Sky Sports)
Bayern Munich ayaa kala hadlaysa kooxda Reading saxiixa daafaca midig ee reer England Omar Richards xagaagan. (Telegraph – rukhsad ayaa loo baahan yahay)
Real Madrid ayaa la filayaa inay la soo wareegto daafaca Bayern Munich David Alaba, iyadoo ka garaaci doonta kooxaha Manchester United, Barcelona iyo PSG. (Xiddig)
Barcelona ayaa isaga hartay tartanka David Alaba sababo la xiriira dhaqaalo xumo. (Boostada)
The Safety Council makes a decision a grief of three
Saddex sababood oo guuldaradii Liverpool